I-China Professional isisekelo esimanzi nesomile esihlanganisa ubuso obuthathu bezipanji Umkhiqizi nomhlinzeki | UDongmei
Isisekelo sobungcweti esimanzi nesomile esihlanganisa isipanji sobuso obuthathu
● UKUPHILA: Kwenziwe nge-Superior, Super Soft, Non-Latex Foam. Lokhu kunikeza ukuqhuma okukhulu ukukunika lokho kubukeka okungenasici emoyeni. Kwenza kube lula futhi kusheshe ukusebenzisa izimonyo. I-vegan ngokuphelele nesihluku mahhala.
● UKULUNGISELELA NOKUJIKELELELA: Ukuphela okuyindilinga kuhle kakhulu ekuhlanganiseni izindawo ezinkulu, kuyilapho ichopho linikeza ukunemba okuphezulu okwenza kube izipanji zezimonyo ezinhlobonhlobo eziningi. Lezi zipanji zinkulu kakhulu futhi zithambe uma zimanzi. Zingasetshenziswa ngemikhiqizo yezimonyo ezahlukahlukene ukufaka isisekelo, ukhilimu we-BB, impuphu, ukufihla, ukuzihlukanisa, uketshezi, njll.
● UKUMANYWA NGOKUNCANE: Ngenxa yobuntofontofo nobushelelezi bezipanji zethu abagcini ngokweqile izimonyo. Lokhu kusho ukuthi kuncane umkhiqizo wakho omoshwayo. Futhi akusicasuli isikhumba njengezipanji eziqinile noma amabhulashi. Isikhumba sakho sizokuthanda ngalokhu.
● KULULA UKUHLANZA: Okudingayo insipho namanzi afudumele.
UDongshen uzinikele ekwakheni imikhiqizo yezimonyo zekhwalithi ephezulu kakhulu ngamanani aphansi.
Ukusetshenziswa okomile: ukusetshenziswa okumanzi kokusetshenziswa kwemikhiqizo yobisi noma enokhilimu, izisekelo, okhilimu be-BB, ama-lotion, abafihli. Sebenzisa ithawula lephepha ukukhipha amanzi amaningi kuze kungabikho ukuwa kwamanzi. Hlanganisa ngobumnene ukunciphisa imfucuza engadingekile.
Ukusetshenziswa kwamanzi Hlikihla ngobumnene bese ucindezela isiponji ukwakha amabhamuza. Qhubeka uhlanza bese ukhama ngokushesha kuze kungabikho mabala nogwebu. Sebenzisa ithawula elihlanzekile noma ithawula lephepha ukususa ngobumnene amanzi amaningi, futhi ekugcineni womile umoya.
Ukusebenzisa amanzi afudumele kumanzise isipanji bese ufaka insipho encane ezindaweni ezinamabala.
Gcoba ngobumnene bese ucindezela isiponji ukwakha amabhamuza.
3.Gcina uhlanza bese ukhama ngokushesha kuze kungabikho amabala abonakalayo nama-suds.
Susa ngobumnene umswakama owedlulele ngethawula elihlanzekile noma ithawula lephepha futhi uliyeke lome umoya.
Langaphambilini I-Dongshen high quality isibambo esimhlophe sokhuni sokwenziwa kwezinwele zokwenziwa kwesisekelo
Olandelayo: I-Professional Foundation Blending Makeup Sponge Yokusetshenziswa Okumile noma Okumanzi
Isipanji Sobuhle Blender
Isipanji Sokwakha Isitolo esidayisa yonke impahla
I-Dongshen professional makeup sponge drop shape ...
Dongshen wholesale makeup isipanji latex-free obl ...
I-apricot yobungcweti enobuso obunezigaba ezintathu ...
Ukushefa Setha, Yenza amabhulashi, Ukugunda Izinwele, isethi yokwenza ibhulashi, Setha i-Makeup Brushes, Ithuluzi Brushes Brushes,